Nepal Online Patrika मनोरञ्जन दाेस्राे विवाह गर्दै गायिका अञ्जु पन्त, काे सँग गर्दै छिन् त विवाह ? भिडियाेमा हेर्नुहाेस्
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं। दाेस्राे विवाह गर्दै गायिका अञ्जु पन्त, काे सँग गर्दै छिन् त विवाह ? भिडियाेमा हेर्नुहाेस् । लोकप्रिय गायिका अञ्जु पन्तले दोस्रो विबाह गर्ने मा,नसिकतामा छिन् ।
छोरी परितोषिकाले हरेक पल आमा अञ्जुलाई विबाहको सल्लाह दिँदै आएका कारण अञ्जुले छोरीकै कारण पनि छोरीको आ,त्मसम्मान र उनको इच्छा पू`रा गर्न र आफ्नो भावी जीवनलाई अगाडी बढाउनका लागि पनि विबाह गर्नु`को विकल्प नभएको बताइन् ।।
विबाह गर्न सुझाईरहे`का कारण आँफु`ले पनि त्यस विबाहमा सोच्न थालेको कुराकानीका क्रममा बताएकी छिन् । अञ्जुका पन्तका अनुसार उनले अर्को वर्षसम्म विबाह ग`र्ने भन्ने प्रकाशको प्रश्नमा स्वि,कारेकी छिन् । यद्यपी उनले पूर्ण रुपमा भने स्विकारेकी छैनन ।
हेर्नुहोस् भिडियाे कुराकानि:-
हामीले नयाँ पुस्ता र युवाहरुका लागि नयाँ व्यवस्था खडा गर्नुपर्छ । हामीले वर्तमान प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।’ गत डिसेम्बरमा चिनियाँ अधिकारीहरुले एन्ट ग्रुपमाथि एकाधिकारविरुद्धको अनुसन्धान गर्दै कम्पनीलाई पुन:संरचना गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
माले को- रोना महामारीका बीच युरोप, अमेरिका र विश्व स्वास्थ्य (डब्लूएचओ) लाई मास्कलगायतका विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा अपडेट भइरहने माले अक्टोबर १० यता ट्वीट पनि गरेका छैनन् ।
‘मनसँग मन’मा अतिथी भूमिकामा पल र पुजा